Masuuliyiinta Komishanka Xuquuqul Insaanka oo ka hadlay duruufo ay ku soo arkeen xabsiga Mandheera | FooreNews
Home wararka Masuuliyiinta Komishanka Xuquuqul Insaanka oo ka hadlay duruufo ay ku soo arkeen xabsiga Mandheera
Masuuliyiinta Komishanka Xuquuqul Insaanka oo ka hadlay duruufo ay ku soo arkeen xabsiga Mandheera
Hargeysa (Foore)- Gudoomiyaha Komiishanka Xuquuqul Iinsaanka Qaranka Marwo Aamina C/laahi Axmed oo ay weheliyaan Xubno ka tirsan Komishankankaas ayaa maanta Kormeer hawleed ku tagay Xabsiga Mandheera.
ujeedada kormeerkooda Xubnaha Komiishanka Xuquuqul iinsaanku ayaa la sheegay inay xidhiidhay u kuurgalida nolosha dhabta ah ee maxaabiista waxaanay xog warano la yeesheen Maxaabiista iyo Madaxda Xabsiga Mandheera.
Gudoomiyaha Komiishanka Xuquuqul Iinsaanka Qaranka Marwo Aamina C/laahi Axmed oo kormeerkooda kadib u waramaysay Warbaahinta ayaa sheegtay inay soo arkeen Koox 36 qof ka kooban kuwaas oo ahaa maleeshiyaadkii dagaalka kala hor yimid Ciidanka Qaranka ee Deegaanka Buuhoodle waxaanay xustay in maxaabiistani u sheegeen in maamulka Xabsiga Mandheera ay si wanaagsan ula dhaqmeen.
Gudoomiyaha Komiishanka Xuquuqul Iinsaanka Qaranku waxay soo dhawaysay wax ka bedel lagu sameeyay Xabsiga Mandheera gaar ahaan in lagu soo kordhiyay qaybo ay maxaabiistu wax ka baran karaan sida Nijaarada iyadoo ay wakhtigaas tababar ku qaadanayeen 18 Maxbuus kuwaas oo Todobo ka mid ahi ay ka mid yihiin kooxaha Budhcad badeeda ee Ciidanka Ilaalada xeebuhu ay qabteen.
Gudoomiyuhu waxay intaas ku dartay in arrintani ay muujinayso sidii ay maxaabiistu marka ay Xukumadooda dhamaystaan ay ugu soo noqon lahaayeen bulshadooda iyagoo xirfad ay ku shaqaystaan leh.
Marwo Aamina C/laahi Axmed waxay ku dooday in dhaliisha qudha ee ay arkeen ay tahay Xaalada Caafimaad ee Xabsiga oo hoos u dhac ka muuqdo waxaanay u soo jeedisay hay’adaha arrintan ku shaqada lihi inay dadaal u galaan sidii wax looga qaban lahaa daryeelka Caafimaad ee Xabsiga Mandheera.
Previous PostWasiirka Ganacsiga oo Khubaro Faransiis ah ka gudoomay 500 Buug oo ay ka qoreen ataarta qadiimiga ah Next PostGuddoomiyihii Jaamacadda Hargeysa oo Xilkii iskaga casilay cabashadii ardaydiisa